Jubbaland oo si xoogan uga hortimid maamulka cusub ee dowladda... | Universal Somali TV
Jubbaland ayaa waxay si xoogan uga hortimid maamulka cusub ay Dowladda Federaalka ka dhistay Gobolka Gedo, taa oo ay ku tilmaamtay mid baal marsan dastuurka dalka.
Bayaan ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa waxaa lagu sheegay in Jubbaland ay ka xun tahay falalka sharci-darrada ah baa bayaanka lagu yiri ee ay Dowladda Federaalka ka waddo Gobolka Gedo, kuwaas oo sababay qalqal amni, jahawareer siyaasadeed iyo burbur bulsho.
"Sidaas daraadeed Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay cadeynaysaa in ay waddo Dowladda Federaalka Somaliya ku xadgudubka dastuurka iyo baabi'inta nidaamka federaalka ah ee dalka u degan." Ayaa lagu yiri bayaanka.
Sida bayaanka lagu sheegay waxaa ay Jubbaland aqoonsan tahay Gudoomiye-yaashii ay iyadu horey ugu magacawday Gobolka Gedo, isla-markaana ay yihiin kuwa keliya ee sharciga ah
Jubbaland ayaa dadka reer Gedo ugu baaqday inay la shaqeeyan Maamulka Gobolka Gedo ee sharciga ah, ciddii aan la shaqeyna ay qaadi doonto wixii masuuliyad-darro ah ee ka dhasha, sida bayaanka lagu yiri.
Kan-xigaHadalhayn xoogan oo ka dhalatay cirii...
Kan-horeMuwaadiniin ku xanibnaa dalka Kenya o...
Boqolaal qof oo laga soo qab qabtay Suuqa Magaalada Kismaayo
Lafta-gareen iyo Deni oo kulan casho kaga qaybgalay Muqdisho (SAWIRRO)
Ra'iisal Wasaaraha cusub oo codsi u jeediyay Golaha Shacabka
Gabar shan jir ahayd oo xalay lagu kufsaday Muqdisho
Ciidanka Xoogga Dalka oo dagaal kula wareegay deegaanka Miirdoogle
Shabaab oo soo bandhigay diyaarad Drone ahayd (SAWIRRO)
55,230,127 unique visits